राराबाट प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनः १८ पन्ना, ३१ बुँदा (पूर्णपाठ) - Everest Dainik - News from Nepal
राराबाट प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनः १८ पन्ना, ३१ बुँदा (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, बैशाख १ । कर्णालीको रमणीय रारा तालको डिलमा नयाँ वर्षको झुल्के घामसँगै एउटा कुर्सी राखिएको थियो । दायाँतिर राष्ट्रिय झण्डा टाँगिएको थियो ।
राराको डिलमा स्थानीयहरु हिँडिरहेका देखिन्थे । छेउमा सेनाको हेलिकोप्टर थियो । सोही हेलीकोप्टर चढेर रारा पुगेका मन्त्रीहरु पनि छेउमा थिए । र, त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भावना मिश्रित १८ पन्ने लिखित सम्वोधन गरे देशबासीका नाममा ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सीसीयुमा भर्ना
प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएको विकास, समृद्धि, तीब्र गतिको विकास, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका विषयहरु भाषणमा समेटिएका छन् ।
प्रकृतिको रमणीय वक्षस्थलमा पुगेका कारणले हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको भाषणमा सौन्दर्यरस र सपनाहरुको मिश्रणमात्रै हैन, महानन्द सापकोटाको कवितासमेत कोट गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्वोधनमा आफू तेह्रथुमको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकोसमेत बताए ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे ट्रमलाई, २ मिनेट कुराकानी !
कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आजबाट सुरु हुने रारा महोत्वसको उदघाटनपूर्व प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्वोधन गरेका हुन् ।
यसअघि शुक्रबार राराको डिलमा कर्णाली प्रदेशको क्याबिनेट बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री र काठमाडौंबाट गएका केही मन्त्रीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।
एउटा सानोतिनो पुस्तिकाजति नै लामो प्रधानमन्त्रीको भाषणको पूर्णपाठ यस्तो छ-
याे पनि पढ्नुस तराईमा किन गएनन् ओली चुनाव प्रचारका लागि ?
PM’s New Year address from Rara April 13, 2018